छोरीले बनाइन आमाको हत्याको योजना, हत्या आरोपित तीनजना सार्वजनिक – Daunne News
छोरीले बनाइन आमाको हत्याको योजना, हत्या आरोपित तीनजना सार्वजनिक
By Daunne News	 On असार १६, १४:०४
भक्तपुरको चाँगुनारायण–७ की सावित्रा भट्टराईको हत्यामा उनकै छोरीको संलग्नता रहेको पाइएको छ ।
प्रहरीको प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट यस्तो भेटिएको हो ।
चाँगुनारायण नगरपालिका-७ बाँसघारीमा डेरा गरेर बस्दै आएकी सिन्धुपाल्चोककी ६० वर्षीया साबित्री भट्टराईको आइतबार बिहान चक्कु प्रहार गरी भएको हत्या भएको थियो ।
सावित्रीको हत्याका योजनाकार छोरी ईश्वरी र उनको प्रेमी नौसाद
हत्याको अनुसान्धानका क्रममा प्रहरीले उनकी छोरी २७ वर्षीया ईश्वरीसहित चार जनालाई पक्राउ गरेको छ ।
पक्राउ पर्नेमा सिरहा घर भइ हाल भक्तपुर बस्ने मोहम्मद नौसादलाई धादिङबाट, भारत घर भएका अर्जुन कुमार भनिने भोला कुमार, भारतकै मोहम्मद रहिशलाई मकवानपुरबाट पक्राउ गरिएको प्रहरीले जनाएको छ। उनीहरुलाई प्रहरीले साेमबार पत्रकार सम्मेलन गरी सार्वजनिक गरेका हुन्। यस्तै, मृतककी छोरी ईश्वरी भट्टराई पनि पक्राउ गरिएको छ।
आफ्नो प्रेमको बारेमा आमाले थाहा पाएपछि आमाबाट आफ्नो प्रेमी र प्रेमको बारेमा घटना बाहिर आउने आशंकाले छोरीले आफ्नै प्रेमी मोहम्मद नौसादसँग मिलेर अन्य दुई जना भाडाको गुण्डा ल्याइ आमाको हत्या गरेकी अनुसन्धानबाट खुलेको प्रहरीले जनाएको छ ।
प्रहरीका अनुसार ईश्वरी पुरानो ठिमीका मोहम्मद नौसादसँग सम्बन्धमा थिइन् । यसबारे आमाले थाहा पाएपछि प्रेमीसँग मिलेर हत्याको योजना बनाएको पाइएको महानगरीय अपराध अनुसन्धान महाशाखा, टेकुका एसएसपी सहकुलबहादुर थापाले बताए ।
रकम पाएपछि उनीहरुले चक्कु प्रहार गरेर सावित्राको हत्या गरेको प्रहरीको भनाइ छ ।
हत्यामा सम्लग्न ३ जना
पक्राउ परेकामाथि ज्यान मुद्दामा म्याद थपेर विस्तृत अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ । प्रहरीले पत्रकार सम्मेलनमा ३ जनालाई सार्वजनिक गरेपनि छोरीलाई भने सार्वजनिक गरेको छैन ।
उनीहरूलाई अपराध महाशाखाको टोलीले विभिन्न ठाउँबाट पक्राउ गरेको हो। अभियुक्त सार्वजनिक गर्दै अपराध महाशाखाका प्रमुख सहकुल थापाले छोरीले आफ्नो अवैध सम्बन्ध लुकाउन आमाको हत्या गरेको प्रारम्भिक अनुसन्धानमा खुलेको बताए। उनले भने, ‘घटनाको प्रकृति र मोबाइलको कल डिटेल हेर्दा दुई जनाको सम्बन्ध मृतक आमाले थाहा पाएको देखिन्छ।’ घटनाबारे थप अनुसन्धान गरिरहेको प्रहरीले बताएको छ।
के थियो खास हत्याको कारण ?
सावित्रीको विवाह भईसकेको र एउटा छोरा समेत रहेको अवस्थामा आमाले घटना बाहिर ल्याइदिने र आफ्नो प्रेमीसँग विवाह गर्न नदिने देखेर हत्या भएको प्रहरीले अनुसन्धानबाट खुल्न आएको जनाएको छ ।
हत्याको क्रममा प्रयोग गरिएको चक्कु
२७ वर्षीया ईश्वरीले सोनाम थापा मगरसँग बिहे गरेका थिए । नौ वर्षअघि बैबाहिक सम्बन्धमा बाँधिएका उनीहरुको एक छोरा पनि छ । घरगृहस्थी चलेकै थियो ।
ईश्वरी गार्मेट कारखानामा काम गर्दा सिरहाका मोहमद नौसादसँग नजिकिइन् । त्यही बेलाको उनीहरुको सम्बन्ध यति नजिक भयो कि ईश्वरीले गार्मेन्टको काम छोडेपछि पनि नौसाद बाँसबारीस्थित ईश्वरीको घरसम्मै आउन थाले ।
ईश्वरीका श्रीमान् सोनामले एयरपोर्ट अगाडि होटल गर्दथे, श्रीमान प्रायः होटेलमा व्यस्त हुने भएका कारण पनि पनि नौसादलाई ईश्वरीको घरसम्म आउन सहज भयो ।
ईश्वरीकी आमा साबित्री थापा छोरीज्वाइँ कहाँ आइरहन्थिन् । त्यही क्रममा उनले छोरीको बाहिरी सम्बन्ध बारे उनले थाहा पाए । उनले ज्वाइँ सोनाम थापा मगरलाई सबै कुरा भनिदिने भन्दै सचेत गराउँदै आफ्नी छोरीलाई छाड्न र विदेश जान भन्दै सावित्रीले नौसादलाई १ लाख रुपैयाँ पनि दिइन् । नौसाद ९ जेठमा यूएई पनि पुगे तर उनीहरुको सम्बन्ध झन गाढा बन्दै गयो ।
यूएई पुगे पछि सम्बन्ध टुट्नुको साटो सामाजिक सञ्जालमार्फत कुराकानी बढ्दै गयो । उनीहरुको सम्बन्ध बढ्दै गएपछि दुवै जना एकअर्कालाई विवाह गर्न चाहान्थे तर आमाले त्यसो हुन दिन मानेन् । आमाले विवाहको लागि मन्जुरी नदिएपछि आमा हुन्जेल आफूहरुको विवाह नहुने निष्कर्षमा पुगेर उनीहरुले आमाको हत्या गरेको महानगरीय अपराध अनुसन्धान महाशाखाका प्रमुख एसएसपी सहकुल थापाले बताए ।
त्यसपछि नौसाद असार १० मा युएईबाट सुटुक्क फर्किए र कन्ट्राक्ट किलर खोज्न १२ गते भारततिर लागे उनले भारतबाट अर्जुनकुमार भनिने भोलाकुमार र मोहम्मद रसिदलाई लिएर १४ गते नेपाल आए ।
प्रहरीका अनुसार उनीहरुले यति सम्म योजना बनाएको पाइयोको आमाको हत्या नहुन्जेलसम्म एक अर्कासँग भेटघाट र कुराकानी पनि नगर्ने योजना रहेछ ।
आफूले मुख थुनेको अर्जुनले हात समाएको र रहिशले घाँटी रेटेको हत्या गरेको बयान नौसादले दिएका छन् । घटनाको प्रयोग भएको चक्कु अर्जुन र रहिशले नै चक्कु ल्याएका थिए ।
हत्या गर्ने दिन छोरी सावित्री दिदीको घर जाने वाहानामा घरबाट बाहिर गइन र नौसादले आफूसहित दुई जना कन्ट्राक्ट किलरलाई लिएर आमा बस्ने कोठामा गए, आमाले नौसादलाई चिने पछि केही बेर भनाभन पनि भयो ।
उनीहरुको झगडा छिमेकी पुजा राईले थाहा पाइन के भयो भनेर सोध्दा आमाले आफन्त आएको बताए पछि पुजा कोठा तिर लागिन । त्यही नै बेला उनीहरुले आमाको हत्या गरे ।
कसरी परे पक्राउ ?
घटनापछि भागेर धादिङको गजुरी पुगेका नौसाद साँझ ७ बजे प्रहरी फन्दामा परे । लगत्तै, सावित्रीको हत्या योजनामा उनकै छोरी ईश्वरीको संलग्नता खुल्यो । उनैले १२ लाखमा दुई जना व्यक्ति हत्यामा खटाइएको पनि खुलाइदिए ।
प्रेमी प्रमिकाले भाडामा प्रयोग गरेका दुई अपराधी पनि भागेर सीमा काट्ने तयारीमा थिए । तर, अपराध महाशाखाको प्राविधिक विश्लेषणका आधारमा उनीहरु मकवानपुरमा देखिए र सोमबार बिहान पक्राउ परे । उनीहरुको साथबाट घटनामा प्रयोग भएको चक्कु पनि बरामद भएको प्रहरीले जनाएको छ ।
प्रहरीकाअनुसार नैसाद पक्राउ पर्जुअघिसम्म ईश्वरीले आमाको हत्या भएको भन्दै बिलौना मात्र गरेकी थिइनन्, हत्यारा पक्राउ गर्न माग गर्दै आएकी थिइन् ।
मध्यविन्दुको न्यायिक समितिमा मुद्दाको चाप बढ्दो, १ सय २२ मुद्दामा ८५ पछ्र्यौट